Topnepalnews.com | दोधारा चाँदनीको सुन्दरनगर र शान्तीटोल डुबानमा,दर्जन परिवारको बिचल्ली(फोटो/भिडियो)
Posted on: August 12, 2018 | views: 7093
पप्पु गुरुङ्ग, दोधारा । भारतले नाङ्ला स्केपको ढोका खोले पछि जगबुडा नदीमा आएको बाढले दोधारा चाँदनीको २ बस्ती डुवानमा परेको छ् । गए रातीबाट आएको अबिरल वर्षा संग जगबुडा नदीमा आएको बाढी ओभर फ्लो भएर माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० शान्ती टोल र वडा नं. ८ सुन्दरनगर बस्ती जलमग्न भएको छ् । आज अपरान्ह देखि जगबुडा नदीको जलस्तर बढेर बस्तीमा पानी पस्न थालेपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानियहरुले बाढीमा फसेकाहरुलाई उद्धार गर्न थालेका स्थानियहरुले बताएका छन् ।
बाढीको क्षतिको बारे यकिन भईनसकेको बताएको छ् । उनिहरुलाई सकुशल उच्च सुरक्षित स्थानमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ् । डुबानका कारण कच्ची घर भत्कन थालेको, निर्माण सामग्री, बाली, अन्नपात र अन्य सामग्रीको क्षति भएको माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष ओंम प्रकाश रोकायाले जानकारी दिएका छन् । २०४६ साल पछिको भिषण बाढी भएको वडा अध्यक्ष रोकायाले बताएका छन् ।
सुन्दरनगरमा परबिन्द्र रोकाया, गोपी गुरुङ्ग, करन थापा मगर, शेर बहादुर गुरुङ्ग, निरज पुन, पुरन पुन, ज्ञान सिंह सारु मगर, गोरे बुढा मगर, पुरन राना मगर, दिपेश सारु मगर, गोरे मगर लगाएको घरमा जगबुडा नदीको पानी पसेको वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष ओंम प्रकाश रोकायाले जानकारी दिएका छन् । ‘निकै बिचल्ली भएको छ् । अपरान्ह करिब १ बजे तिरबाट नदीको पानी बस्तीमा पस्न थालेको हो’ वडा अध्यक्ष रोकायाले भने ।
बाढीका कारण घरमा राखिएका विभिन्न सामान सहित निर्माणका सामग्री बगाएको छ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानियहरुको सहयोगमा उनिहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताईएको छ् । आसपास क्षेत्रका लहरे र तरकारी बालीमा समेत नोक्सानी पुगेको छ । यस्तै जगबुडा नदी बस्ती पसेपछि माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० को शान्ती टोलका ४० घरपरिवार डुबानको चपेटामा परेका छन् । सशस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा बल बोडर आउट पोष्ट दोधारा चा“दनी अनुसार शँन्त्ी टोलमा ५ घर बिस्तापित भएको बताएको छ् ।
प्रहरी अनुसार करिब १ सय भन्दा बढी घर प्रभाबित भएको छ् । नदीको बहाव अझै तिब्र भएको कारण तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै स्थानियहरुलाई सजग रहन तथा सुरक्षित स्थानमा बस्न प्रशासनले आग्रह समेत गरेको छ् । बिस्तापित भएका एक दर्जन परिवारहरु आफन्त तथा सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् भने केहीलाई घरमा भान्सा गर्ने अवस्था समेत नरहेको स्थानियहरुले बताए ।
जगबुडा नदीको किनारमा रहेका बस्तीका धेरै घर डुबानमा रहेको माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष नर बहादुर सुनारले जानकारी दिए । माहाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा आएको बाढीको कारण फसेकाहरुलाई उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरेको माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष तथा माहाकाली नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजालीले बताएका छन् ।
‘हामी तत्काल कार्यपालिकाको बैठक ढाक्ने तयारीमा छौं’ माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष तथा माहाकाली नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजालीले बताए । गए राती देखि आएको अबिरल वर्षाका कारणले आफ्नो गाँउमा बाढी आएको र बालबालिका सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको स्थानिय तमान सिंह गुरुङ्गले बताए ।
उता माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १० नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रमा गासिएको जगबुडा पारीको बस्ती अठार नम्वर पिल्लर बस्तीको अवस्था अज्ञात रहेको बताएको छ् । अधिकांश माहाकाली र जगबुडा नदीको तटिय क्षेत्रमा बासोबास गर्ने बासिन्दा बाढीको डर त्रासमा छन् । असार देखि असोज सम्म माहाकाली नगरपालिकाको नदि किनारका बासिन्दा बाढीको डर त्रासमा दिन कटाउने गर्दछन् ।
उनीहरु भन्छन– ‘माहाकाली र जगबुडा तटबन्ध कार्य ब्यवस्थीत नभएको कारण माहाकाली र जगबुडा नदीको तटिय क्षेत्रमा बसाबास गर्ने स्थानियहरु उच्च जोखिममा छन’ माहाकाली र जगबुडा नदीका बस्तीमा मानविय तथा धनमालको क्षती गर्दै आएपनि यसको दिगो समाधानको लागि यस बर्ष पनि सरकारले नया“ योजना भने ल्याएको छैन । यस क्षेत्रको लागी बर्षेनी लाखौ रुपैया तटबन्ध गर्नमा खर्च गरेपनि माहाकाली नदी र जगबुडा नदीको तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बेखबर बन्दै आएको जानकारहरु बताउछन् । साउनमा झरी संगै बाढीको प्रवल सम्भावना रहने हुनाले पनि कुतियाकवर, सुन्दरनगर, शान्ती टोल, बैतिफा“टा लगाएत आसपासका बस्ती अत्यन्त जोखिममा रहेको जानकारहरु बताउछन् ।
बैलबन्द तटबन्ध फुट्ने खतरा
दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १ नजिक रहेको बैलबन्दमा महाकाली नदीको बाँध फुट्न थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् । महाकाली नदीले ४ वटा स्पर बगाए पछि स्थानियहरुमा त्रास श्रजना भएको हो । समाचार तयार पारुन्जेल बेलबन्द नजिक महाकाली तटबन्दमा तारजाली बगाउन थालेपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी पुगेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा बल बोडर आउट पोष्ट दोधारा चा“दनीका प्रहरी निरिक्षक भुप बहादुर राना अनुसार नदीले ४ वटा तारजाली बगाउनुको साथै नदीको बहाव तिब् हुदै आएको बताएका छन् । दोधारा चा“दनी स्थित रहेका सबै सुरक्षा सयन्त्र उच्च सतर्क बसेका छन् । तटबन्ध दिउसै देखि तारजाली नदीले बगाउन लागेको स्थानिय दिल बहादुर सिंहले बताएका छन् । तटबन्ध फुटे दोधारा चा“दनीका मुख्य बस्ती ठुलो त्राशद्धी मच्चाउने निश्चित भएको जानकारहरु बताउछन् ।